★Uphahla Oluphezulu★Isigodlo Sasebukhosini★Nesitezi Esizimele
(295 okushiwo abanye)
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Andra
Ifulethi elibanzi eliyigumbi eli-1 elinophahla oluphezulu elitholakala edolobheni elicishe libe ngamamitha ayi-150 ukusuka e-Hilton Hotel esakhiweni esisanda kulungiswa, eduze neminyuziyamu, amathilomu, izindawo zokudlela nezitolo. Itholakala endaweni yasemadolobheni ene-hip nemfashini kakhulu (Calea Victoriei Street). I-Cismigiu Park iyimizuzu emi-3 ibanga lokuhamba, cishe ama-200m. Imizuzu eyi-10 uhamba uye e-Old Town, ngaphandle komsindo ovela kumakilabhu ase-Old Town nasezinkantini.
Indawo ekahle yokucasha enhliziyweni ephithizelayo yedolobha eliphithizelayo. Kude nezixuku, kodwa kuvumelana nezithombe ezinhle kakhulu zedolobha.
Lesi situdiyo sisanda kulungiswa ngokuphelele futhi sifakwe ngokuphelele ifenisha entsha neyesimanje okuhlanganisa nombhede we-Queen size (160x200). Sidale i-ambiance yokuba isivakashi somuntu ekhaya lethu eliyimfihlo ngokuthinta okuyingqayizivele. Imininingwane enobuhle be-chic kodwa yesimanje ikwenza kube sekhaya. Uzothola isitayela esiya phambili esinokuhlobisa okusheshayo efulethini lethu kanye nezinsiza ezikhethekile.
Nakanjani ukubuka kuzonikela kakhulu kulwazi lwakho. Ifulethi lisesitezi sesi-9 sebhilidi (ikheshi elitholakalayo) libheka enye yezindawo ezikhangayo ezaziwa kakhulu eBucharest - eSala Palatului; I-House of Parliament iyabonakala nasethaleni.
4.96(295 okushiwo abanye)
4.96 · 295 okushiwo abanye
Lolu uhlu olufushane olunamamnyuziyamu/izindawo eziseduze ongazivakashela (ibanga lokuhamba imizuzu embalwa):
1.Isigodlo saseCantacuzino, esisingatha i-George Enescu Museum
(I-URL HIDDEN) yamaqoqo wobuciko
4.I-Athénée Palace Hotel, manje eseHilton
7. Umtapo wolwazi weNyuvesi yaseBucharest
9.Piața Revoluției (Revolution Square), okuhlanganisa neSikhumbuzo Sokuzalwa Kabusha
16.Imnyuziyamu Kazwelonke Yomlando waseRomania
17.I-Casa de Economii kanye ne-Consemnațiuni (CEC)
18.Ithiyetha Kazwelonke (TNB)
Uma ufuna ukuzijabulisa, maningi futhi amathuba. "Idolobha Elidala" laseBucharest - elinezindawo zokudlela ezingaphezu kuka-250 namakilabhu atholakala emizuzwini eyi-10 kuphela ukusuka efulethini. Ungakhohlwa ngeSala Palatului (ngaphesheya komgwaqo - indawo yemibukiso, amakhonsathi abukhoma namakhonsathi obuciko.)
Sizotholakala 24/7 ngemibuzo/izidingo zakho ngocingo kanye/noma ngemiyalezo ye-Airbnb.
Uzoba nokhiye bakho futhi ungeza futhi uhambe ngendlela othanda ngayo.
UAndra Ungumbungazi ovelele